5. Ingabe uNkulunkulu ubusa futhi aphathe kanjani umhlaba wonke? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Ebubanzini bomhlaba nomkhathi, izidalwa ezingenakubalwa ziyaphila futhi zizalane, zilandela umthetho wokuphila ozungezayo, futhi zibambelele emthethweni owodwa ongaguquki. Labo abafayo bahamba nezindaba zalabo abaphilayo, futhi labo abaphilayo bayaphinda umlando ofanayo onosizi walabo asebefile. Ngakho isintu asikwazi ukungazibuzi: Siphilelani? Futhi kungani kufanele sife? Ubani ophethe lo mhlaba? Futhi ubani owadala lesi sintu? Isintu sadalwa uMama Oyimvelo? Ingabe isintu sizilawulela sona ngempela ikusasa laso? … Isintu asazi nhlobo ukuthi ngubani oyiNkosi yomhlaba nazo zonke izinto, kungasaphathwa ukungazi kwaso isiqalo nekusasa lesintu. Isintu simane siyaphila ngokuphoqeleleka phakathi kwalo mthetho Akekho ongaphunyuka kuwo futhi akekho ongawushintsha, ngoba phakathi kwezinto zonke futhi emazulwini kukhona oyedwa osuka phakade kuze kube phakade obusa phezu kwakhe konke. Yilowo ongakaze abonwe ngumuntu, Lowo isintu esingakaze simazi, isintu esingakaze sithembele ebukhoneni Bakhe, kepha Nguye owaphefumulela umphefumulo kokhokho besintu futhi wanika ukuphila esintwini. Nguye onikayo futhi owondlayo isintu ukuze sibe khona, futhi oqondisa isintu kuze kube namhlanje. Ngaphezu kwalokho, Nguye futhi Nguye yedwa isintu esibheke Kuye ukuze siphile. Uphethe ubukhosi phezu kwazo zonke izinto futhi ubusa zonke izinto ngaphansi komhlaba nezulu. Ulawula izinkathi zonyaka ezine futhi Nguye obiza umoya, ungqoqwane, iqhwa, kanye nemvula.Unika isintu ilanga futhi alethe ukuza kobusuku. Nguye owendlala amazulu nomhlaba, wahlinzeka umuntu ngezintaba, amachibi nemifula kanye nazo zonke izinto eziphilayo phakathi kwayo. Isenzo Sakhe sikhona yonke indawo, amandla Akhe akhona yonke indawo, ukuhlakanipha Kwakhe kukhona yonke indawo, negunya Lakhe likhona yonke indawo. Umthetho nomgomo ngamunye uqukethe isenzo Sakhe, futhi yonke iveza ukuhlakanipha kanye negunya Lakhe Ubani ongazikhipha ngaphandle ekubuseni Kwakhe? Ngubani ongazikhipha kumacebo Akhe? Zonke izinto zikhona ngaphansi kwamehlo Akhe, futhi zonke izinto ziphila ngaphansi kobukhosi Bakhe. Ukwenza Kwakhe namandla Akhe kushiya isintu singenakho okunye esingakhetha kukho ngaphandle kokuvuma ukuthi ukhona ngempela futhi uphethe phezu konke. Ayikho enye into ngaphandle Kwakhe engalawula umhlaba jikelele, kungasaphathwa ukuhlinzeka lesi sintu okungenakukhawuka.
Ngenkathi uNkulunkulu edala zonke izinto, wabekela izintaba imingcele, amathafa, izingwadule, amagquma, imifula, kanye namachibi amakhulukazi. Emhlabeni kunezintaba, amathafa, izingwadule, amagquma, kanye nezinhlobo zamanzi. Akuzona izinhlobo ezahlukene zezimo zezindawo? UNkulunkulu wabeka imingcele phakathi kwazo zonke lezi zinhlobo ezahlukene zezimo zendawo. Uma sikhuluma ngokubekwa kwemingcele, kusho ukuthi izintaba zicacisiwe ngokwazo, amathafa acacisiwe ngokwawo, izingwadule zinophawini wazo, amagquma anezindawo zawo ezimiyo. Kukhona futhi izinhlobo zamanzi amaningi anjengemifula kanye namachibi amakhulukazi. Okungukuthi, ngenkathi uNkulunkulu edala zonke izinto wehlukanisa izinto zonke ngokucacile. … Kuzo zonke lezi zimo zezwe kanye nezezindawo ezidalwe nguNkulunkulu, ukuphethe konke ngendlela ehleliwe nemiswe kahle. Ngakho zonke lezi zimo zezwe zisekhona eminyakeni eyizinkulungwane ezimbalwa, amashumi ezinkulungwane zeminyaka emva kokudalwa nguNkulunkulu. Zisayidlala indawo yazo ngayinye ngayinye. Nakuba ezikhathini ezithile kusabheduka izintabamlilo, ngezikhathi ezithile kuqubuka ukunyikima komhlaba, kuphinde kube nokugudluka okubanzi komhlaba, uNkulunkulu akasoze nakancane avumele uhlobo oluthile lomhlaba ukuthi lulahlekelwe umsebenzi olwadalelwa wona. Kungesizathu salokhu kuphatha kukaNkulunkulu kuphela, ukubusa Kwakhe kanye nokuqonda Kwakhe le mithetho, ukuthi konke lokhu—konke lokhu okujatshulelwa ngumuntu nokubonwa ngumuntu—kuqhubeka nokuphila ngendlela ehlelekile ezweni.
Zonke izinto ezadalwa nguNkulunkulu—noma ngabe zigxumekeke endaweni eyodwa noma ziphefumula ngamakhala azo—zinemithetho yazo yokuphila. Esikhathini eside ngaphambi kokuthi uNkulunkulu adale lezi zinto eziphilayo wayesezilungisele izindawo zazo eziyizindawo ezingamakhaya, izimo zezindawo zokuthi zikwazi ukuqhubeka nokuphila. Lezi zinto eziphilayo bezinezindawo zazo ezimiselwe ukuphila kuzo, ukudla kwazo, izindawo zazo ezingamakhaya ezimisiwe, izindawo zazo ezimisiwe ezifanele ukuphila kwazo, izindawo ezinezimo zokushisa ezifanele ukuphila kwazo. Ngaleyo ndlela bezizozulazula noma zikubukele phansi ukuphila komuntu noma lokho okunethonya empilweni yazo. Yindlela lena uNkulunkulu aphatha ngayo zonke izinto, ehlinzeka isintu ngendawo enhle kakhulu yokuphila. Konke okuphilayo phakathi nazo zonke izinto, ngakunye, kunokudla kwakho okokusimamisa ukuphila ezindaweni zakho. Kulokho kudla, kubopheleke ukuba sendaweni yakho yokuzalwa ukuze kukwazi ukuqhubeka nokuphila. Endaweni eyilolo hlobo, kuyaphila, kuyanda, futhi kuqhubekela phambili kulandela imithetho uNkulunkulu akwakhele yona. Ngenxa yalezi zinhlobo zemithetho, ngenxa yokulungiselela kukaNkulunkulu okwandulelayo, zonke izinto ziphila ngokuzwana nesintu, futhi isintu kanye nazo zonke izinto kuyaphilisana.
Ngenkathi uNkulunkulu edala zonke izinto, wasebenzisa zonke izinhlobo zezindlela namasu ukuletha ukulingana kuzo, ukulinganisa izimo zenhlalo nokuphila ezintabeni nasemachibinikazi, ukulinganisa izimo zokuphila ezitshalweni kanye nasezinhlotsheni zonke zezilwane, izinyoni, izinambuzane—inhloso yakhe kwakungukuvumela zonke izinhlobo zokuphilayo ukuthi kuphile kwande kulandela imithetho ayeyibekile. Azikho izinto zendalo ezingaphuma kule mithetho, futhi ayikwazi ukwephulwa. Kukulolu hlobo lwempilo ejwayelekile lapho abantu bekwazi khona ukuphila ngokuphepha bande, izizukulwane ngezizukulwane. Uma izidalwa eziphilayo zeqa inani noma imikhawulo ebekwe nguNkulunkulu, noma zeqa isivinini ezikhula ngaso, izikhathi, noma inani lazo ngaphansi kokubusa Kwakhe, isimo senhlalo nokuphila komuntu kungahlukumezeka ngamazinga ahlukahlukene okuphazamiseka. Ngasikhathi sinye, ukuphila komuntu kungaba sengcupheni. Uma uhlobo olulodwa lwezidalwa eziphilayo lulukhulu ngesibalo, luzoqola abantu ngokudla, kubhidlike imithombo yamanzi abantu, kuphinde kulimale izindawo zabantu. Ngaleyo ndlela, ukuzalana kwabantu noma indlela abaphila ngayo kungathinteka masinya.
Kulokhu kwasukela uNkulunkulu azidala, ngokwemithetho ayeyilandela, zonke izinto bezisebenza futhi ziqhubeka nokuthuthuka. Ngaphansi kweso Lakhe, ngaphansi komthetho Wakhe, zonke izinto bezilokhu ziqhubeka nokuthuthuka zihambisana nokuphila komuntu. Akukho neyodwa into ekwazi ukuguqula le mithetho, akukho neyodwa futhi into engabulala le mithetho. Kungenxa yomthetho kaNkulunkulu othi zonke izinto kuyakwazi ukwanda, futhi ngenxa yomthetho Wakhe nokulawula Kwakhe okuthi zonke izinto kuzokwazi ukuqhubeka nokuphila. Lokhu kusho ukuthi ngaphansi komthetho kaNkulunkulu, zonke izinto kuba khona, kuyakhula, kuyanyamalala, kuphinde kuvuselelwe ngendlela ehlelekile.
Ubukhona bomhlaba kamoya abuhlukaniseki nobukhona bomhlaba wezinto ezibambekayo kumuntu. Umhlaba kamoya udlala indawo ebalulekile empilweni kanye nasekufeni komuntu ekubuseni kukaNkulunkulu phezu kwezinto zonke; yiqhaza elibanjwa yiwo leli, ngesinye sezizathu ezenza ubukhona bawo bubaluleke. Kungoba uyindawo engahlukaniseki nezinzwa ezinhlanu, akekho okwazi ukunquma ukuthi lo mhlaba ukhona noma kawukho yini. Okuqhubekayo ngomhlaba kamoya kunamathelene ngqo nobukhona bomuntu, okunomphumela wokuba ukuphila kwesintu kuthonywe kakhulu ngumhlaba womoya. Kungabe lokhu kuyathintana nobukhulu bukaNkulunkulu? Yebo. Ngokusho kwami lokhu, seniyabona ukuthi kungani sixoxa ngalesi sihloko: Kungoba sithinta ubukhulu bukaNkulunkulu, nokuphatha Kwakhe. Emhlabeni ofana nalona,—ongabonakali emehlweni abantu—ukufuza kwawo izulu, imiyalelo, izinhla zokuphatha zingaphezulu kakhulu kunemithetho nezinhlelo zanoma yiliphi izwe ngokomhlaba wezinto ezibambekayo, kanti akukho noyedwa kubantu abahlala kulo mhlaba abangaba nesibindi sokuwuphazamisa noma bazithathele wona. Kungabe lokhu kuyabuthinta ubukhulu bukaNkulunkulu kanye nokuphatha Kwakhe? Kulo mhlaba, kunemiyalelo yokuphatha ecacile, ukuba yizulu okucacile, kanye nemithetho ecacile. Emazingeni ehlukene kanye nasezindaweni ezahlukahlukene, kunabakhokheli ababambelela kabanzi emsebenzini kanye nasekuqapheleni imithetho nezimiso, ngoba bazi kahle ukuthi miphumela mini engalindeleka kwabephula imithetho yezulu, bazi kahle kamhlophe ukuthi uNkulunkulu ukujezisa kanjani okubi akuklomelise kanjani okuhle, kanye nokuthi uziphatha kanjani zonke izinto, indlela abusa ngayo phezu kwazo zonke izinto, kanye, ngaphezu kwalokho, nokubona ngokucacile ukuthi uNkulunkulu uyenza kanjani imisebenzi nemithetho yasezulwini. Kungabe lokhu kwehlukile kulokho komhlaba wezinto ezibambekayo okuhlala kuwo abantu? Kwehluke kakhulu. Umhlaba ongafani nhlobo nomhlaba wezinto ezibambekayo. Njengoba kunemigomo nemithetho ezulwini, ithintana nobukhulu bukaNkulunkulu, ukuphatha, kanye, ngaphezu kwalokho, nesimo sikaNkulunkulu nalokho anakho kanye nayikho.
Ukudalelwa kwesintu nokwendawo yonke kusondelene nobukhosi boMdali, kuboshwe kwaqina nokuqondisa koMdali; ekugcineni ngeke kuhlukaniswe negunya loMdali. Ngemithetho yazo zonke izinto umuntu aqonda ngazo ukuqondisa koMdali nobukhosi Bakhe; ngemithetho yokuphila uthola ukulawula uMdali; kusukela ekudalelweni kwazo zonke izinto umuntu aziphothulayo ngezindlela uMdali asebenzisa ngazo ubukhosi Bakhe futhi abalawula ngazo; nasemijikelezweni yokuphila yabantu kanye nazo zonke izinto umuntu abona kukho ukuqondisa koMdali namalungiselelo azo zonke izinto nabantu abaphilayo futhi abone indlela lokhu kuqondiswa okuyidlula kude ngayo yonke imithetho yasemhlabeni, imithetho, nezinqubo, nawo wonke amanye amandla. Mayelana nalokhu, isintu siphoqelelekile ukuba sibone ukuthi ubukhosi boMdali ngeke buhlukunyezwe yinoma isiphi isidalwa, okungekho mandla angathinta noma aguqule izehlakalo nezinto ezinqunywe kusengaphambili uMdali. Kungaphansi kwale mithetho yaphezulu umuntu nazo zonke izinto kuphila futhi kuzalana, izizukulwane emva kwezizukulwane. Ingabe lokhu akulimeleli ngeqiniso igunya loMdali?
Okwedlule: 4. Ingabe uNkulunkulu weluse futhi wahlinzeka kanjani isintu kuze kube sezinsukwini zamanje?
Okulandelayo: 1. IBhayibheli liyirekhodi kuphela lezigaba ezimbili zikaNkulunkulu Inkathi Yomthetho neNkathi Yomusa; alilona irekhodi lomsebenzi kaNkulunkulu wonke
1. Umuntu kufanele aqonde ukuthi umyalezo osatshalaliswa yiNkosi uJesu Ngenkathi Yomusa kwakuyindlela yokuphenduka kuphela